Imali yokutshintsha Phawundi omhle (GBP) Ukuze Rand (ZAR) bahlala zonaniso Forex
Amazinga Forex exchange oluhlaziyiweyo: 16/04/2021 17:11
Phawundi omhle - Rand ixabiso ngoku kwi zonaniso Forex ngelo 16 UTshazimpuzi 2021
17:11:02 (Umyinge Forex uhlaziyo in seconds 59)
1 GBP = 19.80 ZAR
I-Forex - eyona ntengiso iphambili. Ireyithi yokutshintshiselana nge-intanethi kunye notshintsho oluhlala rhoqo ukusuka kutshintshiselwano lwe-Forex. Uhlaziyo olukhawulezileyo lwe phawundi omhle. Imiboniso phawundi omhle ukuya Rand inqanaba lotshintshiselwano ngomzuzu.
Itshathi Forex yorhwebo Rand - Phawundi omhle ubomi, 16 UTshazimpuzi 2021
Itshathi Forex yorhwebo phawundi omhle Ukuze Rand ubomi, 16 UTshazimpuzi 2021
Kwiwebhusayithi yethu unokufumana itshathi ye phawundi omhle ukuya Rand inqanaba lotshintsho kwi 16 UTshazimpuzi 2021. Ukujonga ngokufanelekileyo phawundi omhle ukuya Rand kwi-Forex, siyibonisa kwigrafu. Sebenzisa itshathi yereyithi yokutshintsha ukuze uqonde ngokukhawuleza utshintsho lotshintsho. Ixabiso lokutshintshwa kweshadi rhoqo emva kwemizuzwana engama-30.
Tshintshela Phawundi omhle Ukuze Rand Phawundi omhle Ukuze Rand Imali yokutshintsha Phawundi omhle Ukuze Rand imbali izinga lotshintshiselwano
Lokurhweba ngekhompyutha phawundi omhle (GBP) ukuba Rand ngelo xesha
Ixabiso lokutshintshwa kwembali ngomzuzu ngamnye. -0.01 ZAR ngomzuzu ukunciphisa i phawundi omhle ( GBP) ukuya ku Rand. Imbali yamanani otshintshiselwano kwimizuzu yokugqibela ibonisiwe kwitafile. Amaxabiso a phawundi omhle ngomzuzu zibekwe etafileni ukuze kulungele ukubona umahluko.
19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 19.81 19.81
Lokurhweba ngekhompyutha phawundi omhle (GBP) ukuba Rand urhwebo lilixa lokugqibela
Utshintsho lweqondo lokutshintshwa kunokujongwa iiyure zonke. -0.0045 ZAR ngeyure iyinciphisile phawundi omhle ( GBP) ukuya ku Rand. Imbali eyi-10 ye phawundi omhle ukuya Rand evela kwi-Forex etafileni kwiphepha. Sinetafile yemilinganiselo yexabiso kwiiyure ezili-10 ezidlulileyo ukuze ubonakale ngokulula.
19.80 19.81 19.80 19.81 19.82 19.81 19.80 19.80 19.80 19.80
Lokurhweba ngekhompyutha phawundi omhle (GBP) ukuba Rand Intsingiselo yanamhlanje 16 UTshazimpuzi 2021
17:10 16:10 15:10 14:10 13:10 12:10 11:09 10:09 08:53 07:39
19.80 19.80 19.78 19.79 19.78 19.79 19.80 19.75 19.73 19.70